माथिल्लो तामाकोशि जलबिद्दुत आयोजना घाटामा - Likhu Online
१ मंसिर २०७७, सोमबार ०८:३२ प्रकाशित
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड रू. १ करोड ७८ लाख १ हजार घाटामा रहेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आयोजना रू. १ करोड ३० लाख ५५ हजार घाटामा रहेको थियो । गत वर्षको भन्दा यो वर्ष आयोजना बढी घाटामा रहेको हो ।
बजारमा गहुँको बीउ अभाव, किसान चिन्तित